China Center Drive lathe For Ukusekela Roller ifektri nabakhiqizi |I-Oturn
Ilathe ye-CNC eneziphetho ezimbili Ilathe ye-CNC eneziphetho ezimbili ingumshini osebenza kahle futhi onokunemba okuphezulu.I-workpiece eboshwe ingakwazi ukuguqula indilinga yangaphandle, ubuso bokugcina kanye nembobo yangaphakathi ngesikhathi esifanayo.
I-lathe ye-CNC ephethe kabili
Ilathe ye-CNC eneziphetho ezimbili iwumshini osebenza kahle futhi onemba kakhulu.I-workpiece eboshwe ingakwazi ukuguqula indilinga yangaphandle, ubuso bokugcina kanye nembobo yangaphakathi ngesikhathi esifanayo.Ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphakeme kunenqubo yendabuko, futhi i-coaxiality nokunemba kwezingxenye ezicutshungulwayo kungcono.
Ngokwesicelo sekhasimende, ukulayisha nokukhipha izisetshenziswa ezisizayo kanye nezisetshenziswa ezizenzakalelayo zokulayisha nokukhipha zinganikezwa ngokungakhethi.I-clamping diameter isuka ku-φ5mm-φ250mm, kanti ubude bokucubungula busuka ku-140mm-3200mm.
I-CNC lathe enezipintshi ezimbili eziphambene
Ithuluzi lomshini lisetshenziselwa kakhulu ukuguqula i-shaft emfushane nezingxenye ezincane zediski.
Ngokudluliswa okuzenzakalelayo phakathi kokulandelana okubili kokucubungula ama-workpieces, umshini uqedela ukucutshungulwa kwembobo yangaphakathi, indilinga yangaphandle kanye neziphetho zombili zengxenye ngokulandelanayo.
Umshini ungahlonyiswa ngama-manipulators, ukulayisha okuzenzakalelayo kanye nokuthulula kanye namadivayisi wokugcina ukuze kuqedelwe ukucubungula okuzenzakalelayo kwezingxenye.t kuthuthukiswe ngokukhethekile ukuguqulwa kokuguqulwa kwe-shaft emifushane kanye nezingxenye zepuleti ezincane.
Ukusekela Roller Machining Solution
I-Support roller ingenye yezingxenye ezibalulekile "zamasondo amane nebhande elilodwa" kumabhuldoza ama-crawler kanye ne-hydraulic excavators.
Kunokucaciswa okungu-4 kwama-bulldozer roller kanye nokucaciswa okungu-7 kwe-excavator roller, ngokuya ngamamodeli ethu akhona, sihlukaniswe izigaba ezi-3:
Sekela uhla lokucaciswa kwe-roller nomshini onconyiwe
I-roller ububanzi bangaphandle
I-rough 234 (umkhiqizo oqediwe 225)
I-rough 286 (umkhiqizo oqediwe 279)
Umdwebo we-schematic we-roller esekelayo ucutshungulwa umshini ngale ndlela elandelayo
I-SCK205S eneziphetho ezimbili ze-CNC lathe
■Umshini wamukela ukwakheka kwemibhede ethambekele engu-450, enokuqina okuhle nokususwa kwe-chip.
■Ibhokisi lokuphotha lihlanganisa izingxenye ezintathu zesistimu yokuphotha, i-fixture ne-clamping cylinder, nesakhiwo esihlangene nomsebenzi onokwethenjelwa.I-fixture iboshwe nge-hydraulic.I-diameter ye-clamping ye-clamp ihlukaniswe ngamabhulokhi amabili.
■I-clamp iwuhlobo lwe-collet.Izinzipho ezilungisayo zifakwa ku-elastic chuck esikhundleni sezingxenye ezicutshungulwayo futhi kushintshwe ububanzi bokubopha.Udinga kuphela ukushintsha izinzipho zokulungisa, okuyinto esheshayo futhi elula.
■ Kudingeka amathuluzi amaningi ayisicefe ngokuya ngezingxenye ezenziwe ngomshini.Ukuze ugweme ukuphazamiseka kwamathuluzi, i-turret yenziwe ngokwezifiso, futhi ububanzi obujikelezayo bekhanda lokusika likhulu.Ukuze wenze i-turret iqine, ukuphakama okuphakathi kwe-turret kungu-125mm.
■Umshini ufakwe uhlelo lokulawula lwamashaneli amabili, futhi izindawo ezimbili zokuhlala zamathuluzi zingaxhunyaniswa ne-spindle ngesikhathi esisodwa noma ngokuhlukene ukuze kuqedelwe ukucubungula kanyekanye noma ngokulandelana kwazo zombili iziphetho zengxenye.
■Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezihlukene zamakhasimende ahlukene, leli thuluzi lomshini lingafakwa ikhonsoli yesokunxele/kwesokudla ukuze amakhasimende ayikhethe.
■Mayelana nokulayisha nokukhipha, okwamanje ukulayisha nokuthulula ngesandla.Uma kucatshangelwa isisindo esisindayo samasondo asekelayo, i-truss-type noma i-joint-type-othomathikhi yokulayisha nokulayisha imishini ingahlonyiswa, kuncike ekuxoxisaneni nomthengi.
Ubukhulu bokuphenduka ububanzi bombhede
Ubukhulu bobubanzi obujikelezayo bomzimba oslayidayo
Ubukhulu bobubanzi bokubopha
Ubude bokucubungula obukhulu
Imininingwane ye-Spindle clamping
Ububanzi bembobo yokuphotha
Ubude ukusuka enkabeni yokuphotha kuya phansi
I-Slewing servo, ukukhiya i-hydraulic
Ummese wangaphandle usayizi wesikwele
Ububanzi bebha eyisicefe
Usayizi womshini (ubude×ububanzi×ubude)
Okwedlule: I-Flat Type Lathe
Olandelayo: I-Lathe Yokucupha Ipayipi Yekhwalithi ephezulu ye-CNC